मैले कसरी सहयोग गर्ने ? - MeroReport
Posted by puza Pariyar on May 31, 2017 at 1:30pm
मेरी साथीको बिहे भएको १ बर्ष मात्रै भएको छ । उनीहरुबीच विवाह अघि लामो समय देखि सामाजिक संञ्जाल फेसबुकमा कुरा हुन्थ्यो । कुरा हुँदै जाँदा उनीहरु एउटा सम्बन्धमा रहे अझ सोझो भाषामा भन्दा लब अफेयर्समा रहन पुगे । सुरुमा साथीको परिवारले उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई स्वीकार गरेन । यता, केटाको परिवारमा उनीहरु बीचको सम्बन्धको बारेमा जानकारी भएता पनि उनीहरु पनि खुशी भने रहेनछन् । यस्तैयस्तैमा उनीहरुको विवाह साधारण तरिकाले भएको थियो । बिहे भएको ६ महिना सम्म उनीहरुको सम्बन्ध राम्रै चलिरहेको थियो । तर समय बित्दैजाँदा उनीहरुको सम्बन्धमा बिस्तारै फाटो आउँदै गएछ । दिनहुँ रक्सी खाएर आउने, अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्ने, उस्तै परे हात छोड्ने, उसको घर परिवारको ख्याल राखेन भन्दै अनेक याताना दिने, उसको माइत तिरको बेइज्जत गर्छु भन्दै धम्क्याउने, खाना पकाएको मिठो भएन देखि लिएर आफ्नै श्रीमतीको हरेक काम मन नपराउने उसको श्रीमान अरु केटी सँग बोल्ने, सुनाउने गर्दो रहेछ । मेरी साथी उसको पेटमा अहिले ५ महिनाको बच्चा पनि हुँकदै रहेछ । आफ्नो पटेमा हुँदै गरेको बच्चा यसमा पनि छोरा नै हुन्छ भन्ने सोच राख्ने श्रीमान अनि परिवार । उ आफ्नोे सम्बन्धलाई सुधार्न चाहान्छे तर सकेकी छैन् । उ आफ्नो बच्चाको भविष्य अनि आफ्नो भविष्यको सोचले निकै तनावमा छे । आफ्नो सम्बन्धलाई सुधारेर अघि बढ्न चाहान्छे तर दिनदिनै बिग्रदै गएको उसको श्रीमानको व्यवहारले मर्नु न बाच्नुको स्थितीमा पुर्‍याएको उसको भनाई छ । आफ्नो परिवालाई जसोतसो सम्झाएर आफ्नै खुशीले आफैले रोजेको केटा सँग विवाह गरेकाले उसले परिवारलाई केही कुरा भन्न पनि सकेकी छैन् । न त घर तिरको परिवारले उसको कुरा सुनिदिएका नै छन् । आफ्नो सम्बन्धको बारेमा खुलेर कसैसँग भन्न नसक्दा पिल्सिनु बाहेक अरु कुनै उपाय भेटेकी छैन रे उसले । उ आफ्नो जिन्दगी खुशीका साथ जिउन चाहान्छे । केही बन्न चाहान्छे । आफ्नो आत्मसम्मान अनि स्वाभिमानका साथ अघि बढ्न चाहान्छे । तर, परिवारको इज्जत, पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको भविष्य अनि समाजको डरले उ अहिले पनि त्यही सम्बन्धमा बाधिन बाध्य छे ।
फेसबुक मार्फत आएको उसको यो एसएमएसले मेरो मनमा प्रश्नहरु थुप्रिएका छन् । के उसले आफ्नो समस्या लुकाएर उपाय भेटिएला ? जुन सम्बन्धमा सम्मान छैन् जुन सम्बन्धमा विश्वास छैन यस्तो सम्बन्धको भविष्य कस्तो होला? के उसले आफ्नो श्रीमान्लाई बुझन नसकेकै होला त ? यदि श्रीमानबाट टाढा रहेर उसको जीवनमा खुशी आउला ? अनि सम्बन्धमा सुधार नै आएन भने त्यस्तो वातावणमा उसको बच्चाको भविष्य कस्तो होला ? उसको श्रीमान्ले उ माथि गरेको व्यवहार घरेलु हिंसा भित्र पदैन र ? मेले सहयोग गरुँ त कसरी गरुँ ? यो सबै कुरा थाहा पाएर पनि चुपचाप बसे मलाई साथी सम्झेर उसले मागेको सहयोग मैले कसरी गर्ने ?
साथीको नाम, ठेगना लुकाउन बाध्य छु ।